Hala Iibiyo, Lacagtaa Dhaanta – Jamaahiirta Liverpool Oo Aan Waxba Ula Hadhin Mohamed Salah, Farriina U Diray Maamulka Reds – Latest Sports News
Hala Iibiyo, Lacagtaa Dhaanta – Jamaahiirta Liverpool Oo Aan Waxba Ula Hadhin Mohamed Salah, Farriina U Diray Maamulka Reds
Liverpool ayaa xalay si kumeelgaadh ah u qabatay hoggaanka horyaalka Premier League kaddib markii ay 2-1 kaga adkaatay Fulham oo ay marti ugu noqdeen garoonka Craven Cottage.
Sadio Mane iyo James Milner ayaa dhaliyey goolasha caawiyey kooxda tababare Jurgen Klopp, balse ciyaartoygii hore ee Liverpool ee Ryan Babel ayaa isaguna goolka madiga ah u saxeexay Fulham.
Natiijadan waxay Liverpool siisay fursad ay laba dhibcood kaga sarrayn karto Manchester City oo kulankeedii usbuuca ee Premier League uu baaqday maadaama ay ciyaaraysay FA Cup oo ay iska xaadirisay wareegga semi-finalka.
Saddexlayda afka hore ee Mane, Salah iyo Firmino ayaa ahaa dileyaashii horraantii xili ciyaareedkan guusha laga sugayey, balse shalay, Mohamed Salah ayaa ahaa laacibkii Liverpool ee ugu liitay garoonka sida ay muujiyeen qiimayntii ciyaartoyga lagu sameeyey, sidoo kalena weeraryahanka reer Brazil ee Roberto Firmino ayaa qaybtii dambe lagu beddelay Origi.
Halka ay Firmino iyo Salah la’yihiin bandhiggoodii fiicnaa, waxa is muujiyey Sadio Mane oo goolka hore dhaliyey ka labaadna uu ahaa rikoodhe isaga lagu galay.
Haddaba markii ay ciyaartu dhamaatay, jamaahiirta Liverpool ayaa dalbaday in Mohamed Salah laga diro kooxda, isla markaana ay tahay xilligii la iibin lahaa, maadaama uu u muuqdo mid kartidiisii iyo xirfaddiisiiba sii lumayso.
Xiddiga reer Masar oo ka ciyaarayey garabka midig ee weerarka ayaan saamayn weyn lahayn, balse kulamadii ugu dambeeyey oo dhan sidan ayuu iska ahaa marka laga reebo ciyaartii Champions League ee ay kasoo adkaadeen Bayern Munich.
Jamaahiirta Liverpool oo adeegsanaya bartooda Twitterka ayaa waxay intooda badan codsadeen in la iibiyo Salah oo lacagta kasoo baxda lagu soo beddesho ciyaartooyo kale oo tayo iyo tamar joogto ah leh.
“Salah wuxuu u baahan yahay in la iibiyo. Inoo lacageeya inta aynu karayno.” Sidaa waxa bartiisa kusoo qoray taageere la baxay Bilaal M.
“Liverpool waxay ahayd inay Salah ka iibiso Barcelona xagaagii hore. Ugu yaraan faa’iido ayay ka heli lahaayeen.” Sidaana waxa soo qoray FPL Dan.
Halkan ka akhriso falcelintii jamaahiirta qaar ka mid ah: